Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo cafis u fidiyay 66 maxbuus - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo cafis u fidiyay 66 maxbuus
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo cafis u fidiyay 66 maxbuus
April 19, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ilaalada hore ee xabsiga Garoowe. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa cafis u fidiyay 66 maxbuus oo ku kala jira xabsiyada gobolada Puntland, sida lagu sheegay war-saxaafdeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Isniin ah.
Maxaabiista ayaa loo cafiyay bisha barakaysan ee Ramadaan darteed iyo cudurka COVID-19, war-saxaafdeedka ayaa intaas ku daray. Dambiyo fudud ayay ku eedaysanyihiin dhamaan maxaabiista cafiska uu u fidiyay madaxweynuhu.
EU, U.S. Weigh Action After Somalia’s President Extends Mandate Without Election
Maxkamada ciidamada Puntland ee gobolka Mudug oo shan xubnood oo Al-Shabaab ah ku xukuntay dil toogasho
Yacqub’s goal leads Puntland to reach final in Somali regional states tournament
Mogadishu-(Puntland Mirror) Puntland’s footballers defeated Hiran & Middle Shabelle 1-0 in the Somali regional states tournament, advancing Puntland to the final. Yacqub Osman has scored the only goal as Puntland beats Hiran & Middle Shabelle [...]